Kulan xasaasi ah oo looga hadlay amaanka dalka
Wasiiradda arrimaha gudaha iyo Gaashaandhiga, Taliyaasha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay kulan looga hadlayay amaanka magaalada kaasi oo ka dhacay Xarunta Taliska ciidamada booliska.
Kulanka oo la isku dhaafsanayay aragtiyo la xiriira sida wax looga qaban karo amaanka caasimada iyo guud ahaan dalka ayaa markii uu soo gaba gaboobay waxaa saxaafadda la hadlay qaar ka mid ah xubnihii ka qeyb galay kulanka oo ay ka ka mid ahaayeen wasiirka gaashaandhiga, Wasiirka Arrimaha gudaha iyo amaanka Qaranka Taliyeyaasha Ciidamada Booliska iyo Ciidamada Milatariga.
Wasiiradda Gaashaandhiga iyo arrimaha gudaha Xuseen Carab Ciise iyo Cabdi Samad Macalin Maxamuud ayaa sheegay in xaaladda amaan ee Muqdisho ay tahay mid laisku haleynkaro iyagoona shacabka uga mahad celiyay sida wanaagsan oo ay ciidamada ugarab taaganyihiin.
Taliyaha Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya C/qaadir Sheekh Cali Diini ayaa uga mahad celiyay Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya howlgalada sida joogtada ah ay uga wadaan gobolada dalka kuwaas oo lagu cirib tirayo haraadiga kooxda shabaab.
Ugu dabmbeyntii ayaa waxaa warfidiyeenada la hadlay Taliyaha ciidanka Booliska Shariif Sheekhuna Maye waxa uuna qeexay In laga bilaabo maanta aan magaalada lagu arki Karin gaari aan laheen Taargo isagoona shacabka uga digay in ay isticmaalaan gawaari aan laheen Taargo.